Root L-Epinephrine HCL (55-31-2) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / L-Epinephrine HCL (55-31-2)
SKU: 55-31-2. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka qiyaasta ee L-Epinephrine HCL (55-31-2), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
L-Epinephrine hydrochloride waa daroogada lidka ku ah shoogga laga isticmaalo oo loo isticmaalo samatabbixinta xiritaanka wadnaha oo degdeg ah iyo samatabbixinta shoog anaphylactic, laakiin sidoo kale daaweynta cudurrada kale ee xasaasiyadeed (sida neefta neefta, urtikaria).
L-Epinephrine HCL Calaamadaha aasaasiga ah
Name: L-Epinephrine HCL
Formula kelli: C9H14C2NO3
Miisaankani waa: 183.204g / mol
Isticmaalka L-Epinephrine HCL (55-31-2)
L-Epinephrine HCL (55-31-2) Qiyaasta Adult
Marka loo isticmaalo xasaasiyadda ka hortagga,
Marka hore, duritaanka subcutaneous ama intramuscular ee 0.2 ~ 0.5mg, haddii loo baahdo, waxaa lagu soo celin karaa 1 daqiiqado kasta 10-15, qiyaasta ayaa si tartiib tartiib ah loogu kordhin karaa waqtiyada 1 LMG; shoogga anaphylactic, qadarka bilowga ee 0.5mg, cirbado yar yar ama ka durugsan, kadibna 0.025 ~ 0.05mg xidid, hadii loo baahdo, waxaa lagu soo celin karaa daqiiqado kasta 5-15 daroogada.
waxaa loo isticmaalaa sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda, oo leh hal qadar ah oo ah 0.3mg, cirbadaha hooseeya ama cirbadaha.
daaweynta neefta faleebo, bilowga 0.2 ~ 0.5mg, cirbadaha hoose ee hoose, haddii loo baahdo, waa la soo celin karaa daqiiqad kasta 20 saacadaha 4, si tartiib tartiib ah u kordhaya xilliyada 1 LMG.
waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro wadnaha, oo lagu qasi karo ka dib markii laga duray ama faleebo xidid, 1 0.1 ~ LMG, haddii loo baahdo, waxaa lagu soo celin karaa daqiiqado kasta 5.
sida daroogada loo yaqaan 'vasoconstriction' inta lagu jiro suuxdinta, diiradda L-Epinephrine HCL (55-31-2) ee dareeraha suuxdinta ee gudaha, subarachnoid block waa mid sare (1: 10 000), wadarta guud ee 0.3mg. Faafinta suuxdinta gudaha waa mid aad u hooseeya (1: 100 000 ama 1: 200 000), qadarka guud waa inuusan ka badnayn LMG.
xinjiraha anti-bronchial, cirbadeynta subcutaneous ee miisaanka 0.01mg / kg ama qaybta jirka jirka 0.3mg / m2, qiyaasta ugu badan ee yada 0.5mg, marka loo baahdo, daqiiqado kasta L5 ku noqo daawooyinka L, Xilliga 2, ka dib saacadaha 4 kasta Muddooyinka l;
sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda, cirridka hooseeya ama cirbadaha lagu duro miisaanka 0.01mg / kg ama dhul dusha jirka 0.3mg / m2;
waxaa loo isticmaalaa xiritaanka wadnaha, 0.005 ~ 0.01mg / kg ee wadnaha ama xididada, ama 0.15 ~ 0.3mg / m2 oo ku yaal aagga jirka.
Tilmaan-bixinta Maamulka Daawooyinka
waqti dheer ama ka badan isticmaalka ayaa soo saari kara iska caabbinta daroogada, joojinta daroogada dhowr maalmood, saameynta dib ayaa loo soo celin karaa.
1: 1 (1mg / ml) Xoojinta daawada L-Epinephrine HCL (55-31-2), wadnaha ama ka hor inta faleebo faleebo ah waa in la qasi karaa, laguma talinayo in laga hortago cirbadeynta intro-arterial, kan dambe wuxuu sababi karaa dhiig-qabad aad u daran, taasoo keenaysa necrosis unug.
Cirbadaha soo noqnoqda ee goobta xaddidan waxay sababi kartaa necrosis unugyo, goobta cirbadaha waa in la rogaa.
marka loo isticmaalo shoog anaphylactic, mugga dhiigga waa in la buuxiyo isla mar ahaantiis iyadoo sababtuna tahay in la kordhin karo marinnada dhiigga iyo mugga dhiigga oo aan ku filneyn.
Sida loo iibsado L-Epinephrine HCL laga bilaabo AASraw
Budada Lapatinib (231277-92-2)